Muxuu salka ku hayaa safarka Farmaajo ee Congo? | KEYDMEDIA ONLINE
Muxuu salka ku hayaa safarka Farmaajo ee Congo?
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Kinshaasa ee caasimadda dalka Koongo halkaas oo booqasho labo maalmood ah ay uga bilaabantay.
MUQDISHO, Soomaalya – War ka soo baxay Dowladda ayaa lagu sheegay in ujeedka Safarka Madaxweynaha muddaddu ka dhamaaday ee Farmaajo, uu yahay mid la xarira, iskaashiga diblomaasiyadeed.
“Safarka Madaxweynaha ayaa ku qotoma kor u qaadidda iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dal iyo midka heer qaaradeed ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, ciribtirka fakhriga iyo xagjirnimada.” Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Madaxtooyada.
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, oo lagu tiriyo mid ka mid ah waddama ugu lita amni ahaan, dalalka Africa, isla markaana ay ku sugan yihiin ciidamo nabad ilaalin, majiro iskaashi amni oo Soomaaliya wax weyn u soo kordhinaya, sida ay ku doodayaan dadka u dhuun duleela siyaadda Soomaaliya.
Farmaajo oo wajahaya cadaadis xooggan oo gudaha iyo dibadda ah, ayaa go’aansaday inuu billaabo safarro uu ku marayo waddo badan oo Africa dhaca, wuxuuna ugu horreyn ka billaabay la kulanka Madaxweyne Félix Antoine Tshisekedi, oo haya talada Ururka Midwga Afrika ee billaha ah, si uu u weydiisto aqbalaadda muddo kordhinta uu sameytay.
Sida ay Keydmedia Online, u sheegeen ilo Xog ogaal ah, Farmaajo wuxuu billaabay olole uu ku doonayo inuu qaar ka mid ah Madaxweynayasha waddamada Africa uga raadsado taageero ku aaddan muddo kordhinta, ka hor inta uusan soo bixin go’aanka ugu danbeeya ee Midowga Africa ka gaaran waqti dheereysiga Farmaajo.
Kadib go’aanka cad ee Wakiillada Beesha Caalamka ee jooga Soomaaliya oo kuwa reer galbeedku hor boodayaan ku diideen muddo kordhinta, Farmaajo, wuxuu markaan diiradda saarayaa olole iyo galangal siyaasadeed oo gobolka ah, si uu garab u helo.
Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, waa mid aan cagaheeda ku taagneyn sida Soomaaliya oo kale, waxayna la daadaa dhaceysaa, dagaalka ay kula jirto jabhadda fallaagada ah ee The Allied Democratic Forces, oo dagaallo qaraar joogto ula gashaa ciidamada nabad ilaalinta MUNOSCU iyo kuwa Dowladda.